Ukubhiyozela iSan Martín ngezinye iihagu zoncwadi | Uncwadi lwangoku
Namhlanje nguNovemba 11. San Martin. Kwaye sele uyazi: olu suku luza kuzo zonke ihagu. Kukwincwadi. Ndijonga ezi Iincwadi ze-6 apho iihagu zizi protagonists ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, okanye ngendlela yokomfuziselo okanye yokwenyani. Ngamabali eetoni ezahlukeneyo kunye nababhali UBioy Casares, uTusset okanye uGeorge Orwell kunye noNapoleon wakhe, ngaphandle kwamathandabuzo yeyona hagu idumileyo kuncwadi.
1 Ihagu. Ibali lomzala wakho omthandayo - uMichel Pastoureau
2 UMargarita phakathi kweehagu - uPedro Badrán
3 Kwigama lehagu - uPablo Tusset
4 Ii-Adventures ezibalaseleyo ze-I, ihagu-Isitampu esivelayo
5 Idayari yemfazwe yehagu- uAdolfo Bioy Casares
6 Imvukelo yaseFama - uGeorge Orwell
Ihagu. Ibali lomzala othandwa kakubi -UMichel Pastoureau
UMichel Pastoreau ngu Isazi ngembali esidumileyo saseFrance Waziwa kakhulu ngeencwadi zakhe kunye ne-monographs kwi imibala, iimpawu zezilwanyana okanye i-heraldry. Kule ncwadi akukho nobuninzi okanye ngaphantsi obunobuganga bokusixelela imbali yeehagu, ebizwa ngeendlela eziliwaka. Sinabo basondele kakhulu kwaye kwangaxeshanye asibazi, ngenxa yoko uPastoreau ubangqinela apha.
Uhlala ehlisiwe kumfanekiso wakhe ombi njenge iisimboli zobumdaka nobudlakudla, Kubonakala ngathi ayifanelekanga ukuba iqwalaselwe kweli bali. Kodwa ngoku akusekho. Ngapha koko, zonke izilwanyana zinokuba zi-protagonists kwaye ibali lehagu ekugqibeleni liya kuba yindawo yokuhlangana yeendlela ezininzi kunye neendlela. Ke, le ncwadi ilungile unomdla kwaye uyonwabisa kwaye kufanelekile ukujongwa.
Daisy phakathi kweehagu -Pedro Badran
Kuthunyelwe kuyo 2017Le ncwadi isixelela zisithoba amabali omcuphi namnyama ebhalwe ngumbhali waseColombia uPedro Badrán. Umntu ophambili kuye ngumcuphi Ulisa Lopera, umda kunye nomsebenzi waseburhulumenteni weofisi yomtshutshisi okhohlakeleyo. Kodwa ayingomcuphi oqhelekileyo, phantse njengegorha, oqiqa kwaye abale iintshukumo zakhe kakuhle, kodwa endaweni yoko a indoda ephikisanayo ojongene nenceba yobubi aze awele kuyo. Kwaye oku kuvusa uvelwano kunye novelwano ngabafundi.
Egameni lehagu -UPablo Tusset
I-Tusset yaba ngoyena mthengisi ubalaseleyo nge Eyona nto inokwenzeka kwi-croissant. Le ncwadana yeenkwenkwezi yakhe UMkomishinala uPujol, oza kuthi athathe umhlala phantsi, kufuneka aphande Ukufa komfazi oxheliweyo waxhelwa njengasesilarheni. Kufunyenwe isiqwenga sephepha emlonyeni wakhe amagama athile abhalwe ngoonobumba abakhulu: EGAMENI LE NGULUBE. Inkqubo ye- imfihlakalo kunye nesigqebelo Baxubene kwingxelo enomdla efuna ukubamba umfundi zombini kumxholo owakhiwe kakuhle nangale ndlela yokubalisa.
IiAdventures eziBalaseleyo zeYo Pig - Isitampu esivelayo
Isitampu sika-Emer sihlala eLondon kwaye kunjalo umbhali nomzobi. Nguye umbhali wale ncwadi ibonisiweyo ekwabandakanya Idayari eyimfihlakalo ephezulu yehagu. Ilungele i- ngabantwana okanye hayi abaphulaphuli bomntwana. Kweli bali ihagu usicela uncedo Kuba uzijonga njengesidenge ehlabathini nabahlobo bakhe, Idada, Inkomo neegusha, balahlekile kwindawo engaqhelekanga abangayithandiyo. Uyasicela nokuba singaxeleli mntu ngale nto siyifundayo kuba igcwele yeyakhe iimfihlo ezininzi ezingathethekiyo.
Ihagu Yemfazwe Yehagu -I-Adolfo Bioy Casares
UBioy Casares wayengomnye waba ababhali abakhulu baseArgentina bexesha lakhe. Umhlobo osondeleyo kaJorge Luis Borges, phakathi kweencwadi zakhe sineenoveli ezininzi ezinje Ukuveliswa kweMorel o Isicwangciso sokubaleka, apho kongezwa amabali, izincoko kunye neencwadi zolwaphulo-mthetho ezibhalwe kunye neBorges.
Kwesi sihloko sinomhlala-phantsi UIsidore Vidal ukuba ngenye imini ufumanisa ukuba ikhona amaqela olutsha anobundlobongela asongela abantu abadala ngaphandle kwezizathu ezibonakalayo okanye eziqondakalayo. Umzabalazo phakathi kwezizukulwane ngohlobo lwentembeko engenathemba kodwa ngochukumiso lwe ubomi bemihla ngemihla kunye nendlela yokuziphatha.
Uvukelo efama -George Orwell
Kwaye ndiphela kunokwenzeka eyona hagu idumileyo kuncwadi, uNapoleon, umlinganiswa ophambili wale satire yeRussian Revolution kunye noloyiso lweStalinism, ebhalwe nguGeorge Orwell ngo-1945. enye yeencwadi ezothusayo Ngalo lonke ixesha.
Imvukelo yezilwanyana zasefama zonke zi tIxelwe indlela ekhula ngayo kwintlangano yakhe ebonakala ifanelekile ekhokela iqela leehagu nenkokeli yalo enomtsalane uNapoleon entloko nakwelinye icala lomcinezeli okhohlakeleyo. Lakhe ukufunda kusoloko kucetyiswa, kwaye kuninzi kakhulu kula maxesha siphila kuwo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ukubhiyozela iSan Martín ngezinye iihagu zoncwadi